ရခိုင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ဆန်စပါးလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ဝင်ရောက် အားဖြည့် ကူညီဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော အခြေအနေအား တင်ပြ ခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) တွင် ဆန်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) တို့အနေဖြင့် (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါဝင် ကူညီအားဖြည့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်စပါးအသင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်စက်အသင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆန်ကုန်သည် အသင်းတို့ အပါအဝင် ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အနီးကပ် ကွပ်ကဲလမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆန်စပါးဆိုင်ရာရေတို/ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးမြင့်လွင်က ပြောပါသည်။
MFM Biomass Power Co.,Ltd နှင့် MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd Launching Ceremony ကျင်းပခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Fujita Corporation တို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထည့်ဝင်ထားသော Myaung Mya Biomass Power Co.,Ltd ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်မိတ်ဆက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် MAPCO Ayeyar Rice Industry Co.,Ltd ၏ ဖွဲနုဆီထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ (MAPCO)မှ ၁၀၀% ရင်းနှီးမြုပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် ခေတ်မီဆန်စက် နှင့် သိုလှောင်ရုံများ၊ အခြောက်ခံစက်များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ တောင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ရပ်မိရပ်ဖများအား မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို (၂၈.၁၀.၂၀၁၇) နံနက် ၉း၃၀တွင် မြောင်းမြဂုန်နီစက်ရုံဝင်းအတွင်း တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Anti Corruption နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းပေးခြင်း
Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) မှ NOVOTEL Hotel တွင် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော Anti-Corruption Seminar သို့ MAPCO Company မှ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း Seminar တွင် Session အလိုက် အောက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်(၄)ခုကို ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်-
SESSION 1 : WHAT IS THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS TO COMBAT CORRUPTION?
SESSION2: SETTING UP A STRONG ANTI-CORRUPTION POLICY.
ဒေသအခြေပြုလယ်ယာစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ(ASC)အတွက် နိုင်ငံတကာချေးငွေအကူအညီရယူနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် CITIC,MAPCO အဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေး( Release No:23/2017)
၁၅.၉.၂၀၁၇ တွင် နေပြည်တော်ရုံးအမှတ် (၁)စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန- ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး - ဦးဆက်အောင် (ဘဏ္ဍာရေး)၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်- ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ဦးထွန်းဇော် တို့တက်ရောက်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် CITIC Construction Group နှင့် MAPCO မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အသီးသီး ရှိ မြို့နယ်(၃၃)မြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဒေသအခြေပြု လယ်ယာစီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ(ASC)အတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
MAPCO-MRF-CITIC သုံးပွင့်ဆိုင် MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း(Release No;21/2017)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် CITIC Construction Group ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ် (Myanmar Rice Federation -MRF)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) တို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် MoU လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား အား (၂၁.၇.၂၀၁၇)တွင် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
MAPCO-DHL (MOU)လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း(Release No:22/2017)
MAPCO နှင့် DHL Express, DHL Global Forwarding & DHL Supply Chain တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Strategic Collaboration MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအား ၂၄.၇.၂၀၁၇ နေ့ညနေတွင် ရန်ကုန်မြို့ Signature ၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
MAPCO Golden Lace ခေတ်မီဆန်စက် ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနား (Release No:20/2017)
MAPCO GOLDEN LACE ကုမ္ပဏီ၏ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျိုက်လတ်မြို့တွင် တည်ရှိသော Integrated Rice Complex Project (IRCP)ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို၂၀၁၇ ခုနှစ်မေလ(၁၅)ရက် နံနက် (၉း၃၀)အချိန် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းမြင့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမန်းဂျော်နီ နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးနှင့်နိုင်ငံတကာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ MAPCO ဥက္ကဌ ဦးချစ်ခိုင် ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များ ၊ ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။